Filim lagu mataly Islii Nairobi. - BBC Somali
Filim lagu mataly Islii Nairobi.
8 Abriil 2016
barkhadFilim cusub oo uu Hollywood-ka soo saaray oo ku saabsan habka casriga ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada, jilitaankana ay qeyb ka tahay magaalo Kenya ka tirsan ayaa waxaa caalamka ka socda bandhig iyo qiimayn lagu sameynayo.
Filimka oo la magac baxay 'Eye in The Sky', ayaa waxa uu muujinayaa saraakiisha milateriga Mareykanka iyo UK oo ka doodaya suuragalnimada weerrar ay diyaaradaha aanay cidana wadin ka gaystaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaasi oo uu filimku leeyahay argagixiso ayaa waxa ay qorshaynaysaa in ay weerrar ismiidaamin ah ka gaystaan.
Hasayeeshee qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii ayaa waxa ay cambaareeyeen habka sheekada loo sameeyay taasi oo ula muuqata mid faafinaysa fikrad xun.